बैंकहरुको सेयरमा लगानी दोब्बरले बढ्यो, झन्डै १ खर्ब लगानी – खबर नेटवर्कस्
खबर नेटवर्कस् > खबर नेटवर्कस् > बैंकहरुको सेयरमा लगानी दोब्बरले बढ्यो, झन्डै १ खर्ब लगानी
बैंकहरुको सेयरमा लगानी दोब्बरले बढ्यो, झन्डै १ खर्ब लगानी
पोष्ट गरिएको असार. ०७, २०७८ मा ७:३० मध्यान्ह असार ७, २०७८
प्रकाशित : 5:59 pm, सोमबार, असार ७, २०७८
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सेयर कर्जा विस्तारमा आक्रमक बनेका छन् । पछिल्लो १ वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जा दोब्बरले वृद्धि गरेका हुन् ।
गत साउन यता सेयर बजार झन्डै अढाई गुणाले बढ्दा सेयर कर्जा पनि दोब्बरले बढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयर धितोमा ९४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।
यो गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सोही अवधिको तुलनाममा ९९.१८ प्रतिशत प्रतिशत बढी हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म जम्मा ४७ अर्ब ३६ करोडलाख रुपैयाँ सेयर कर्जा लगानी गरेका थिए ।
चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा करिब साढे २४ प्रतिशतले बढ्दा सेयर कर्जा भने शतप्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू आवको १० महिनामा मात्रै थप ४६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ करोड सेयर कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
गत असार सम्ममा बैंकहरुले ५० अर्ब ४० करोड ९७ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा लागनी गरेका थिए । १० महिनामै त्यस्तो कर्जा लगानी ८७ प्रतिशतले वृद्धि भई ९४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
सेयर कर्जा लिनेमा ठूला लगानीकर्ताको वर्चश्व
सेयर कर्जा लिनेमा ठूला लगानीकर्ताको वर्चश्व देखिएको छ । १० महिनाको अवधिमा लगानी भएको कुल कर्जामध्ये ६८ प्रतिशत १ करोडभन्दा माथिको दरले लगानी भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कुल ९४ अर्ब कर्जा लगानी हुँदा ६४ अर्ब रुपैयाँ १ करोडभन्दा माथिको कर्जा लगानी भएको छ ।
यस्तै, ११ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ १ करोडभन्दा मुनि ५० लाखससम्मका दरले लगानी भएको छ । २५ लाखदेखि ५० लाखका दरले १२ अर्ब १३ करोड लगानी भएको छ ।
सेयर कर्जा लिनेमा साना लगानीकर्ता न्यून रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक्ले देखाएको छ । १० महिनाको अवधिमा लगानी भएको कुल कर्जाको जम्मा ७ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ६७ करोड मात्र २५ लाखभन्दा कमले लगानी भएको छ ।
यस कारण बढाए बैंकहरुले सेयर कर्जामा लगानी ?
सेयर कर्जा बढ्नुको मुख्य कारण बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र ब्याजदर सस्तो हुनु नै हो । कोरोनाका कारण समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा अन्य क्षेत्रमा अपेक्षित कर्जा प्रवाह हुन नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयरमा कर्जा लगानी बढाएका हुन् । यद्यपि, बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भित्रै रहेर कर्जा लगानी गरेका छन् ।
चालू सेयर बजारले गति लिँदै जाँदा लगानीकर्ता उत्साहित भई लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै सेयर कर्जा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो ।
यस्तै, पछिल्लो १ वर्ष यता बैकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता छ । जस
चाणक्य पोष्ट असार ७, २०७८
१० अर्बको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दै राष्ट्र बैंक, मंगलबार दिउँसो ३ बजे बोलकबोल
आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले ६० करोडको आइपीओ निष्काशनका लागि पायो ट्रिपल बी रेटिङ्ग